5 मिनेट को लागि एक माइक्रोवेव ओवन मा द्रुत केक
अब माइक्रोवेव मा लगभग कुनै पनि भान्सा छ। तर, सबै भन्दा Housewives यो केवल व्यञ्जन हीटिंग वा उत्पादन तातो स्यान्डविच लागि सामान्यतया प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं अनफ्रिज छिटो कुराको आवश्यक छ भने कहिले काँही, यो बारेमा सम्झना। र अझै! तर यो एकाइ बहुमुखी छ र पाक कला को वास्तविक काम बनाउनको लागि उपयुक्त छ। यसलाई मा पकाउने प्रक्रिया एक पारंपरिक ओवन भन्दा धेरै छिटो हो बाहेक, त्यसैले माथि5मिनेट लागि माइक्रोवेव मा एक केक पकाउन - कुनै समस्या छैन। र छैन केक संग धेरै अनुकूल निम्ति, भान्सा एकाइ धेरै राम्रो Povarskaya प्रतिष्ठा घरपरिवारको नजरमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई प्राप्त गर्न: व्यञ्जन
तर, पनि virtuosos तपाईं पकाउन अघि खाना पकाउने देखि एक माइक्रोवेव ओवन मा एक केक, असफलता को संभावना रोक्न भनेर केही नियमहरू सिक्नुपर्छ। को माइक्रोवेव को सञ्चालन सिद्धान्त अझै पनि एक मानक भट्टीमा को देखि मौलिक फरक छ। र यो खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
को पाक अन्तर्गत तयार एक उच्च पर्खाल हुनुपर्छ व्यञ्जन मा - को माइक्रोवेव आटा मा ओवन भन्दा एकदम बलियो rises। र यो केवल flanges को आधा उचाइ सम्म भर्न गर्नुपर्छ।
पीठो फारम संग छिडकना आवश्यक छैन। चर्मपत्र प्रयोग गर्नुहोस्।
कुनै पनि मामला मा फारम एक ढक्कन ढाकिएको गर्नुपर्छ।
यो एक विशेष "mikrovolnovochnuyu" भाँडा प्रयोग गर्न उचित छ। तर, सुट र कुनै पनि अन्य: चीनी माटो, ग्लास, सिलिकन - बस धातु छैन।
आटा: प्राप्त गर्न
को माइक्रोवेव परीक्षण मा तयार पाक पकवान सन्दर्भमा यहाँ पनि यसको रहस्य छ:
चिनी पूरा dissolution र र्शतहीन सम्म भड्काए हुनुपर्छ। को माइक्रोवेव यसको अनाज CHAR सक्छ र "स्वाद" गैरी केक को छाप सुधार छैन। तपाईं पाक लागि तयार बनाएको मिक्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सानना विशेष नजिक ध्यान हुनेछ।
आटा थप तरल (पानी, जुस, दही, दूध) थप्न सामान्यतया ग्याँस वा विद्युतीय बोर्डहरू लागि व्यञ्जनहरु मा संकेत भन्दा, वा सुखा पनि सुक्खा हुनेछ आवश्यक छ। प्रत्येक प्रबन्ध निर्धारण अन्डा चम्चा लागि, माइक्रोवेव लागि नुस्खा समायोजन अतिरिक्त तरल थप्नुहोस्।
को संरचना समावेश गर्दछ भने पाकेका व्यवहार फल कम भट्टीमा ऊर्जा चयन गरियो।
भित्र केक बाहिर भन्दा छिटो सुखा छ। नेत्रहीन यसलाई थप dampness देखिन्छ भने यो लगभग तयार छ भित्र।
को माइक्रोवेव मा खाना पकाउने लागि अज्ञात समय पकाना को workpiece संग प्याकेज, अनुमानित ओवन को एक चौथाई लिएको छ भने।
को चाल को बाँकी एक केक कसरी बनाउने भएको माइक्रोवेव, एक पारंपरिक ओवन ती फरक छैन।
व्यञ्जनहरु, जो एक "छिटो" केक मा एक माइक्रोवेव ओवन, एक ठूलो धेरै मा तयार गर्न सकिन्छ। तर यहाँ प्रस्ताव - सबैभन्दा Housewives लोकप्रिय। उहाँले पनि थप्दा पीठो आवश्यकता छैन! तपाईं के चाहनुहुन्छ सबै र के परिवार बजेट पकड लिन्छ - पागल एक गिलास लिनुहोस्। उनि लगभग धूलो मा चोट छन्। सबैभन्दा सारा महाराज यो उद्देश्य Grinder लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तीन अन्डा ध्यान संग तीन pounded (राम्रो स्लाइड संग!) चीनी को चम्मच - सेतो तातो। मिश्रण बेकिंग पाउडर चम्चा हालिएको छ, एक नट पीठो मा हालिएको थियो, र आटा सम्म चिल्लो kneaded छ। यो एकदम तरल हुन्छ। फारम एक greased वा पाक कागज संग लाइन।
गर्न ओखर केक propechsya मात्र, तर पनि रसीला बन्न थिएन5मिनेट लागि माइक्रोवेव मा, हामी एक सानो व्यास को फारम, लिटर मा मात्रा लिनुपर्छ। अन्यथा सुक्खा र समतल पैनकेक रही एक जोखिम छ। माइक्रोवेव पाँच मिनेट पूर्ण शक्ति (900W) मा समावेश गरिएको छ। आफ्नो स्वाद के अर्को हुन्छ निर्भर गर्दछ। लामो केक soaking आवश्यक छैन - आटा धेरै नरम छ। दुई केक मा कटौती गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै त्यहाँ कुनै पनि क्रीम चिकनाना, र। तपाईं बस पग्लियो चकलेट खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को अद्भुत केक (त्यो अचानक अतिथि मा descended यदि राम्रो पनि छ त पूर्ण मार्फत, सुखा थियो5मिनेट लागि माइक्रोवेव मा)। दूध - घिउ तीन चमचा, एक, सानो मिश्रित अन्डा संग, चीनी र तीन चार चम्मच गर्मी। मिश्रण चिल्लो छ र चीनी भंग भएको छ भएपछि, नरिवल चिप्स (दुई चमचा), पीठो (चार), बेकिंग पाउडर र वेनिला चीनी को एक चम्चा थप्नुहोस्। आटा खट्टा क्रीम को एक राम्रो स्थिरता गर्दछ। यो एक मोल्ड मा पाँच मिनेट को लागि, अधिकतम ऊर्जा मा, फेरि हालिएको र माइक्रोवेव राख्नु भएको छ। र गर्दा सिरप तयार: चीनी को तीन चमचा भंग र एक चम्चा खन्याउन पानी दुई चम्मच नरिवल को। कसरी फोडे - गर्मी र पानी केक मा कटौती केक बाट हटाउन सकिँदैन। शीर्ष फिटेको संग सजाया छ - र परिवार व्यवहार सेवा छ।
स्ट्रबेरी र वेनिला केक
को माइक्रोवेव ओवन राम्रो छ? तथ्यलाई कुनै केक धेरै चाँडै पकाउन साधारण माटोको कप प्रयोग गर्न सकिन्छ।5मिनेट लागि माइक्रोवेव मा केक - यो सत्य हो! र मिनेट को एक जोडी suffice हुनेछ। व्यक्तिगत केक प्राप्त गर्नुहोस्। मिश्रित चमचा नरम घिउ, दुई दुई सर्विंग्स - granulated चीनी, ठूलो अन्डा, वेनिला र दालचिनी को आधा चम्चा, बेकिंग पाउडर को एक पुरा spoonful र पीठो को एक चौथाई कप। आटा चिल्लो छ, यो बिस्तारै कटा जामुन स्ट्रबेरी हस्तक्षेप र आम एक ठूलो कप मा हालिएको छ। आधा मिनेट मा माइक्रोवेव पूर्ण क्षमता मा समावेश गरिएको छ, र पहिले नै केक cooled र त्यसपछि धुलो चिनी को एक चौथाई कप, पग्लियो मक्खन को एक चम्चा, क्रीम र वेनिला को नै रकम स्वाद (इच्छित घनत्व सम्म मार) देखि तयार ग्लेज, खन्याउन। उहाँले धेरै तयारी राम्रो संग एक माइक्रोवेव ओवन मा - यो सुरक्षित एक मिठाई "केक" मिनेट "भनिन्छ गर्न सकिन्छ।
मान्छे पाक रुचि, यो सूजी प्रयोग गरेर प्राप्त छ र कसरी नाजुक वायुमय थाह छ। उपहार को निर्माण को लागि सूजी को आधा कप दही को नै रकम मा मिश्रित र आधा एक घण्टा सुनिनु गर्न अनुमति दिएको छ। दुई spoonfuls - त्यसपछि, अन्डा ठूलो संग एक कचौरा संचालित छ मा, चीनी (आधा कप) र कोका थप्नुहोस्। आटा पूरक आधा कप आटा मिश्रण पछि, बेकिंग पाउडर एक चम्चा संग मिश्रित। पछिल्लो बारी मा हालिएको वनस्पति तेल - एक चौथाई कप। आटा धेरै बाक्लो हुनु पर्छ, र मन्न कठिन प्राप्त। जग एक मोल्ड मा हालिएको छ र छ छ मिनेट को लागि एक माइक्रोवेव ओवन मा हटाइयो। फिटेको खट्टा क्रीम को आधा कप र चीनी को एक चौथाई कप। प्रयोग गर्नु अघि, पकवान संतृप्त सम्म पर्खनुहोस् हुनेछ।
सामान्यतया माइक्रोवेव ओवन मा सुखा एक Korzh, पछि टुक्रा इच्छित संख्या विभाजित गर्ने छ। तर, मिठाई फोटो जस्तै, ठोस र धारिलो हुनुपर्छ। एक माइक्रोवेव ओवन मा केक नै बाटो तयार छ यो ओवन गरिन्छ रूपमा: आटा लागि आधा कप चिनी तीन अन्डा, पीठो को आधा कप, को दांत मिश्रण पछि थपिएका छन् चम्चा मार hydrated सोडा, तेल दुई चमचा र खट्टा क्रीम को तेस्रो कप। राम्ररी आटा सानना पछि आधा विभाजित छ, र एक भाग दुई चम्मच कोको पाउडर पोख्नुहोस्। आटा को आकार दुई कन्टेनर, अनियमित स्ट्रिप्स को पालो हालिएको छ। केक पाक्नु उच्च सबै नै पाँच मिनेट मा हुनेछ। Lubricated उहाँले, दूध (200 ग्राम) संक्षिप्त मक्खन को 200 ग्राम र ब्रान्डी चार चमचा पिटियो।
मुख्य घटक - घरेलु पनिर (लिन कम बोसो राम्रो छ)। ध्यान दिएर को उत्पादन प्याक दुई अन्डा, चीनी को आधा कप र दुई चमचा संग frays दलिया को। थप हावा लागि ब्लेंडर वा खाद्य प्रयोग गर्न राम्रो हुनेछ। परिणामस्वरूप पेस्ट को चम्चा सोडा वा पाक पाउडर थपिएको छ। यो देखि5मिनेट को लागि एक माइक्रोवेव ओवन अर्को केक छ, र यो समय scoreboard मा सेट गरिएको छ। शक्ति, फेरि अधिकतम। को क्रीम खट्टा क्रीम, तपाईं के चाहनुहुन्छ अनुपात मा चीनी संग मार प्रयोग गरिन्छ रूपमा।
सिट्रस भरने र आटा लागि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो लागि: आधा चीनी को चार चमचा र दुई सुन्तला मार ब्लेंडर - स्टार्च। सिट्रस बोक्रा को आधा हटाउन र रस squeeze छ संग आटा लागि (यो एक चौथाई कप हुनुपर्छ)। gelling लागि - सुन्तला puree चर्मपत्र फारम संग लाइन र अधिकतम मा केही मिनेट लागि माइक्रोवेव राख्नु मा फैलाउन छ। आटा तयार: चीनी को एक गिलास मार4अन्डा, को पग्लियो मक्खन (100 ग्राम), रस, zest, बेकिंग पाउडर र पीठो (एक गिलास तीन-चौथाई) को एक चम्मच संग संयोजन। परिणामस्वरूप ठूलो सुन्तला जेली हालिएको छ - र भविष्यमा केक6मिनेट लागि माइक्रोवेव मा राखिएको छ। केक ठंडा दस मिनेट सुन्ताला एक प्लेट मा उल्टो भएपछि शीर्ष थिए।
अब तपाईं कसरी माइक्रोवेव मा अद्भुत केक खाना पकाउनु थाहा छ। व्यञ्जनहरु (फोटो झूठ छैन!) सुन्दर लगातार परिणाम खुसी। र समय पर्याप्त बस स्वादिष्ट खर्च छ!
Marinated पोर्क। बारबेक्यू लागि पोर्क कसरी खटाई मा हालन गर्न
एक रोटी baguette घर कसरी खाना पकाउनु
कीमा बनाएको मासु Patties - छुट्टी तालिका मा एक अपरिहार्य पकवान
कुनै पनि भोजन गर्न - को जाडो लागि स्याउ को चटनी तयार!
Kefir मा स्वादिष्ट र रसदार Kebab तयार
Tartlets। tartlet मा व्यञ्जनहरु नाश्ता
अनुकूलता महिला लियो र धनु पुरुष: के संघ हुनेछ?
टोली किल्ला2सिस्टम आवश्यकताहरु र अवलोकन
चूल्हा को सींग मा चमत्कार। डेक र रणनीति
अब्खाज एड्जाका। खाना पकाउने विधि
नयाँ विचार - कि रचनात्मकता के फीड छ। आफ्नै हातले घर सजाय विचार
"झोला मा" हार्ड-उसिनेर अन्डा, उसिनेर, र
Benicio डेल Toro (Benicio डेल Toro): अभिनेता को Filmography र व्यक्तिगत जीवन
को Mi-171: विनिर्देशों र फोटो
बजार के छ। विनिमय व्यापार को लागि के चयन गर्न